Iiprofayili zepultrusion abavelisi kunye nabanikezeli - China ukuPrinta iiProfayili zeFektri
China Factory Kwenziwe ngentando zu fiberglass nothango for Construction
Iglasi yefayibha eqinisiweyo yeplastikhi (i-FRP) kunye neglasi yefayibha eqinisiweyo yeplastikhi, luhlobo lweglasi yefayibha eqinisiweyo, i-resin ye-polyester engafakwanga njenge-matrix, ngokuqhubekeka okukhethekileyo kwaye lube luhlobo lwezinto zepleyiti, zinendawo eninzi engenanto ye-FRP esetyenziswa njengezinto zokwakha, ezisetyenziselwa umgangatho wokumelana ne-corrosion, i-trench cover, iqonga, i-ship deck, i-stair, i-catwalks, njl njl.
I-FRP Purlin yoKwakha iiNjongo zePurlin Ixabiso
Ukusetyenziswa 1). Iiplins, imiqadi eludongeni kulwakhiwo lwentsimbi 2). Zidibene nakwizinto zokwakha ngokwazo njengebhanti yophahla engasindi, iibakaki, njl. 3). Iikholamu, imiqadi kunye neengalo kwimizi-mveliso ekhanyayo yokuvelisa oomatshini beempawu eziphambili Ukubonakala kwendalo kunye nokungatyibiliki: Isanti yendalo inokongezwa kumphezulu wendalo kunye nokungasebenzi. Nokumelana kunye nokumelana ukwaluphala: Umahluko kwiipropati nentlaka unika zu nokumelana ezahlukeneyo, kwaye kungaba u ...
Ipropathi edibeneyo ye-FRP yeFiberglass I-Beam
1. Umgangatho ophezulu Siqinisekisa ukuba zonke iimveliso ziphantsi kovavanyo oluninzi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngaphambi kokuba zisiwe. 2. Ixabiso elikhuphisanayo Ixabiso liyahluka ngokusekwe kwimveliso yokwenziwa kunye neemfuno zobungakanani. 3. Umsebenzi wethu ogqwesileyo kwinkampani yethu liqela lethu lesayensi kunye netekhnoloji. 4. Eyona nkonzo ibalaseleyo Ngayo yonke imibuzo yakho malunga nathi okanye ngeemveliso zethu, siya kukuphendula ngokweenkcukacha kwisithuba seeyure ezili-12. 5.Ukupakisha kunye nokuhanjiswa kweemveliso kunokupakishwa kunye ne-sh ...
GRP Pultruded Fibreglass Fom Ulwakhiwo fiberglass Tube Ulwakhiwo zu nothango Pultrusion Icandelo / iProfayili
I-Pultrusion yinkqubo eqhubekayo kusetyenziswa ukuqiniswa kwefayibha nge-thermosetting resin matrices. Izinto zokonyulwa ezikhethwe kwangaphambili, ezinje nge-fiberglass roving, imethi, amalaphu alukiweyo okanye ilaphu elithungiweyo, zitsalwa kwindawo yokuhlambela intlaka apho zonke izinto zifakwe kwilitye le-resin engamanzi. Ii-resins eziqhelekileyo zibandakanya ii-polyesters, ii-vinyl esters kunye neephenolics. Ifayibha emanzi-ngaphandle yenziwe ngobume obunqwenelekayo bejiyometri kwaye yatsalwa yintsimbi eshushu. Nje ukuba ungene ngaphakathi kwidiski, i ...
Izinto Zokwakha U Umjelo weNsimbi oSuka kwiFektri yeProfayili yeNsimbi
Intsimbi yeshaneli yintsimbi ende emide enecandelo eliphambeneyo lobume be-groove. Umjelo wentsimbi ngowokusetyenziswa kolwakhiwo kunye nokusetyenziswa kweentsimbi zecarbon yentsimbi, licandelo lesinyithi elintsonkothileyo, icandelo lalo limile. Isitishi sentsimbi ubukhulu becala sisetyenziselwa ulwakhiwo, ikhethini eludongeni ubunjineli, izixhobo zoomatshini kunye nezithuthi ezenziweyo, njl Ukugqitywa kwemveliso yentsimbi yejelo lesinyithi ngokwenza ubushushu kunye nokubeka imeko okanye imeko yokutshisa eshushu. Izibonelelo zethu 1. Umgangatho ophezulu nge-reasona ...
Umgangatho ophezulu we-FRP Angle / i-Glass Fiber Angle / i-Angle yentsimbi
Iglasi yefayibha engasindi eyomeleleyo eqiniswe yimiqadi yeplastiki eqinisiweyo Okokuqala, sikhetha iimveliso ezidumileyo zaseTshayina ukuqinisekisa umgangatho we-FRP. ngaphandle kwemiqadi ye-FRP eveliswe yinkampani yethu.Xa i-deformation deging ifikelele kwi-1 cm, uxinzelelo lusetyenzisiwe kwi-FRP beam.